၂၀၁၈ CES မှာပါဝင်မယ့် Kia ရဲ့ EV concept! – AutoMyanmar
၂၀၁၈ CES မှာပါဝင်မယ့် Kia ရဲ့ EV concept!
Kia Motor Corporation (KMC) အနေနဲ့ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလမှာ ကျင်းပမယ့် CES (Consumer Electronics Show) မှာ EV(Electric Vehicle) concept ကားတွေကိုပြသသွားမှာပါ။ Kia အနေနဲ့ ပြသမယ့် vehicle အမျိုးအစားကိုတော့ တိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် teaser ပုံလေးတွေတော့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ပုံတွေထဲက ကားရဲ့အနောက်အဖုံးမှာ “Niro” ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Niro EV ဆိုတာသိရှိနိုင်မှာပါ။ ပုံတွေကတော့ article ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။
KMC အနေနဲ့ CES မှာ EV concept ကိုပြသမယ့်အပြင် နောက်ပိုင်း Kia ကားတွေမှာပါဝင်လာမယ့် နည်းပညာအစီအစဉ်တွေ၊ ကားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည် တွေကိုချပြသွားမှာပါ။ ပြီးတော့ Autonomous Driving Tech နဲ့ 5G connection ကားတွေကိုလည်း CES မှာချပြသွားဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Autonomus Driving Tech ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလိုအလျှောက်အာရုံခံပြီး မောင်းနှင်ပေးနိုင်မယ့် Tech ပါ။
အပေါ်ကဖော်ပြထားတာကတော့ Dr. Woong-cheol Yang ရဲ့ CES 2018 မှာသူ့တို့မျှဝေသွားမယ့်အချက်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဖောက်သသည်တွေဆီပြောထားတဲ့ စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dr. Woong-cheol Yang ကတော့ Hyundai-Kia R&D ရဲ့ Chairman တစ်ဉီးပါ။
CES ကို Las Vegas မှာ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၂ ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာပါ။ ပွဲကျင်းပမယ့် တရားဝင်ရက်က ၉ ရက်နေ့ဆိုပေမယ့် Kia Press conference ကိုတော့ ၈ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီထဲကစတင်ပြုလုပ် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၂ ရက်နေ့အထိ Kia Motor Corporation က CES မှာရှိနေမှာကြောင့် စိတ်ဝင်စားရင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ CES ရဲ့ detail အချို့ကိုတော့အောက်ပါ link ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Niro EV! Kia Motors to reveal all-electric concept car at CES 2018 https://t.co/WPb1WOIW4v #KiaNiro #CES2018 #CES pic.twitter.com/StUVhdJb0s
— John Dominguez (@DhiDominguez) January 5, 2018
Kia, Motor Show and Event